‘शिक्षासँगै दिइने व्यवहारिक ज्ञानको कारण कस्तुरीका विद्यार्थी धेरै ठाउँमा सफल छन्’
‘शिक्षासँगै दिइने व्यवहारिक ज्ञानको कारण कस्तुरीका विद्यार्थी धेरै ठाउँमा सफल छन्’
बिहीबार १९, असार २०७६
कस्तुरी कलेज इटहरीमा विगत लामो समयदेखि व्यवस्थापन विषय पढाइ हुने गरी सञ्चालनमा रहेको कलेज हो । एउटै मात्र विषय अध्यापन गराएपनि यो कलेजमा विद्यार्थीहरुको संख्या ठूलो छ । यो कलेजको स्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ठ नतिजाको कारण व्यवस्थापन विषय पढ्ने सुनसरी र आसपासका जिल्लाहरुका विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा यो कलेज पर्ने गर्छ ।
कस्तूरी एकेडेमीद्वारा संचालित यस कलेजका विभिन्न विषयहरुमा कलेजका प्राचार्य कमलेश शर्मा पौडेलसंग न्युजलयकी सरिता भण्डारीले गरेको कुराकानी :
भर्नाको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
भर्नाको तयारी राम्रो भइरहेको छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई खबर गर्ने, मिडियामार्फत् अरुलाई जानकारी गर्ने काम भइरहेको छ । विद्यार्थीहरु पनि सोचेअनुसार र हाम्रो क्षमताअनुसार आइरहेका छन् ।
यो कलेजको. मुख्य विशेषताहरु के–के छन् त ?
हाम्रो कलेज इटहरीको एक विशुद्ध व्यवस्थापन विषय पढाइ हुने कलेज हो । यहाँ कक्षा ११ देखि मास्टर्स लेवलसम्मका कक्षाहरु सञ्चालन गरिन्छन् । यहाँ विद्यार्थीहरुलाई पढाइको साथसाथै भोली गएर केहि गर्न सक्ने स्किल, सोँच तथा विचार उनिहरुलाई दिइन्छ । पढेर मात्र केहि हुन्न, पढे अनुसारको व्यवहारमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने हुनु पर्यो जस्ले गर्दा यहा पढेका विद्यार्थीहरु धेरै क्षेत्रमा सफल भएका छन् । चाहे त्यो व्यवसायमा होस्, उद्योगमा होस्, रोजगारीमा होस् सबै स्थानमा विद्यार्थीले राम्रो गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरुलाई पढाई सँगसँगै उनीहरुको आन्तरीक क्षमतालाई हामी बढि ध्यान दिन्छौँ ।
कलेजको बारेमा बताइदिनुस् न । कसरी सुरु भयो, सुरुवातमा के कस्ता चुनौतिहरु आए ?
हामीले २०५५ सालमा आठ जना मिलेर कस्तुरी उच्चमावि भनेर कलेजको स्थापना गरेका थियौ । आठ जनाको लगानी र सोचमा म्यानेजमेन्ट मात्र पढाई हुने कलेजको स्थापना गर्यौँ ।
सुरु सुरुमा निकै कठिनाइहरु आए । तत्कालिन अवस्थामा प्लस टु भन्ने नै मानिसहरुलाई थाहा थिएन । टियु अन्तरगतको आइ ए, आइकम पढ्ने समय थियो । प्लस टु अब लागु हुँदैछ भनेर अभिभावक र विद्यार्थीलाई बुझाउन निक्कै गाह्रो भएको थियो । त्यसैले प्रारम्भिक २–३ वर्ष त विद्यार्थी र अभिभावकलाई बुझाउनै समय लाग्यो । सुरु सुरुमा निक्कै कमजोर विद्यार्थीहरुलाई पनि हामी लिने गथ्र्यौं । नतिजा राम्रो निकाल्नका लागी निक्कै चुनौतिपुर्ण कुरा थियो । त्यसको लागी पनि निक्कै मेहेनत गर्नु पर्यो । हामीले चुनौति र कठिनाइका बाबजुत पनि २०५९ सालमा बिबिए लेबल ल्यायौँ । यस्तै २०६३ सालमा हामीले नर्सरीदेखि कक्षा दससम्म र बिबिएस कक्षा ल्यायौं भने २०६७ सालदेखि मास्टर्स लेवल थप्यौँ । अब आगामी बर्षदेखि एमविए सन्चालन गर्दैछौँ । अन्य ब्याचलर लेबलका कोर्सहरु पनि आगामी वर्षदेखि सुरु गर्नेछौँ ।
तपाइको विचारमा नेपालको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?
पहिलेको तुलनामा अहिलेको शिक्षामा निक्कै सुधार आएको छ । त्यसका पनि धेरै कारणहरु छन् । एक त विदेशमा उच्च शिक्षा हाँसिल गरि नेपालमा फर्केर यहि पेशा गर्नेहरु पनि छन् । जस्ले गर्दा नेपालको पढाइको स्तर आधुनिक भएको छ । अलिकति उच्छृङ्खलता पनि बढेको छ । पैसालाई मात्र सबैकुरा मानेर अगाडी बढ्ने क्रम पनि बढेको छ । राम्रो नराम्रो पाटो जे मा पनि हुन्छ । तर समग्रमा भन्नु पर्दा शिक्षाको पाटोमा जब सरकारले निजिकरणलाई प्रोत्साहन गर्यो, जब निजि क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो । यसले परम्परागत शिक्षाको शैलिमा आमुल परिवर्तन ल्यायो ।
विदेशको तुलनामा शिक्षा क्षेत्र सुधार भइरहेको छ त म भन्दिनँ तर विदेशको तुलनामा हामी पनि चल्नु पर्छ है भन्ने सन्देश चै दिएको छ । प्रायः कलेजहरुका धेरै शिक्षकहरु विदेशबाट अध्ययन गरेर आउनु भएका शिक्षकहरु हुनुहुन्छ । गुणस्तरलाई भन्दा हाइफाइ तथा आर्थिक पाटोलाई बढि ध्यान दिने नराम्रो पाटो हो । नत्र भने अरु कुरालाई हेर्ने हो भने नेपालको शिक्षा आगामी दिनहरुमा अझै राम्रो हुँदै जानेछ ।
के कारणले कस्तुरी कलेजलाई म्यानेजमेन्ट नै पढाउने भनेर स्थापना गरियो ?
जतिबेला हामीले कलेज खोल्ने सोँच बनायौँ, त्यति बेला हामी जनता क्याम्पसमा पढाउथ्यौँ । कलेज खोल्ने भनेर सोँच बनाउदा इटहरीमा विज्ञान विषय पढाई हुदैन थियो । म्यानेजमेन्ट मात्र पढाइ हुन्थ्यो र हामीसंग पनि म्यानेजमेन्टको मात्र जनशक्ती हुनुन्थ्यो । अब फेरी आफुले नपढेको विषयमा भोलि हामीले राम्रोसँग गर्न सकौला या नसकौँला, कम्तीमा म्यानेजमेन्ट हामीले पढेको विषय थियो र विज्ञ शिक्षकहरुपनि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो । म्यानेजमेन्टमा मात्र फोकस गरेर अगाडि बढौँ कम्तिमा एउटा कुरामा मात्र अगाडि बढियो भने समाजले पनि राम्रो कुरा पाउँछ र हामीलाई पनि आफुले गरेको काममा सन्तुष्टि मिल्छ भनेर यो कलेजको स्थापना गरेका हौँ ।
निजि कलेजहरुले शुल्क महंगो लिन्छन् भन्ने गुनासो छ नि ?
निजि कलेजमा महंगो शुल्क छैन । किनभने अहिले निजि कलेजमा भएको शुल्क स्कुलमा भएको शुल्क भन्दा कम नै छ । अरु ठाउँमा होला तर इटहरीका कलेजहरु महंगा छैनन् । सरकारी वा सामुदायिक कलेजहरुलाई आधार मान्ने हो भने महंगो छ । निजि स्कुललाई आधार मान्ने हो भने महंगो छैन ।
निजि कलेजहरुमा विद्यार्थीले बुझाएको शुल्कले नै शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ । कलेजको सबै खर्च हेर्नुपर्छ । निजि कलेजलाई सरकारले हेर्ने हैन । त्यो अर्थमा हामीले शुल्क बढि लिनै पर्यो । तर हामीले शुल्क लिएअनुसार विद्यार्थीलाई सुविधा दिएका पनि छौँ ।
हाम्रा विद्यार्थी तथा अभिभावकमा म यो भन्न चाहन्छु कि राम्रो शिक्षा लिनका लागि बाहिर गइराख्नु पर्दैन । जहाँ गएर पढे पनि मेहेनत विद्यार्थीले गर्ने हो । अविभावले छोराछोरीको पढाइलाई ध्यान दिने हो । अविभावकले आफ्ना नानीलाई कुन कलेजमा के पढाउँदा ठिक हुने हो विचार गरेर पढाउनु आवश्यक छ । एसइइमा यो ग्रेड आयो अब यो विषय पढ्ने भनेर ग्रेडको पछाडी लागेर विषय छनोट नगरौँ । ए आउँदैमा साइन्स र बी आउँदैमा कमर्स भन्ने हुँदैन । ए प्लस ल्याउनेले एजुकेसन पढ्ने रुचि राखेको हुन सक्छ भने वि ल्याउनेले साइन्स पढ्ने रुचि राख्न सक्छ । त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्छ ।
शुक्रबार २०, असार २०७६
Tapai news trp , views badauna j payo tai xapne Maile5yrs kasturi padako khai k paye 66-745lakh kamlesh lai bujako usle bp chock ma4tale ghar thadayo aile tyo5lakh ko rin tirna khadi ako xu kai xaena tya padarara waiyat teacher haru xan kam lagne koi xaena
सुनसरी जिल्ला अदालतबाट कैदीहरु छुट्दै
बीपी प्रतिष्ठान धरानबाटै कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट आउन थाल्यो
इनरुवाका वरिष्ठ साहित्यकार उपेन्द्र पागलको निधन
भारतमा पुलबाट खसेर एक नेपालीको मृत्यु